गीतकार जोशीको एल्बम ‘श्रावणी’ सार्बजनिक
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आँफु पनि संगीतको पारखी भएको बताएका छन् । गीतकार श्रवणकुमार जोशीको एकल शब्द रहेको एल्बम ‘श्रावणी’ बिमोचन गर्दै प्रचण्डले भने आँफुले सबैभन्दा बढी गीत संगीत पढ्ने समयको सुनेको बताए । गीतकार जोशी ब्यबसायीका अलावा राम्रा गीतकार भएको समेत तर्क गरे । सङीतकार सुनिल...
बलिउडका चर्चित कलाकार ओम पुरिको ६६ वर्षको उमेरमा निधन
काठमाडौं- बलिउडका चर्चित कलाकार ओम पुरिको ६६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। शुक्रबार उनी मुम्बइ स्थित आफ्नै घरमा मृत फेला परेको उनको परिवारले पुष्टि गरेको छ। हृदयघातका कारण उनको मृत्यु भएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन् । ओम पुरिले धेरै बलिउड मेनस्ट्रिमका फिल्म अनि अन्य आर्ट फिल्ममा अभिनय गरेका...
टेलिचलचित्र तीतो सत्यमा ‘योर माई लभ बा’ का रुपमा चर्चित भएका रंगकर्मी एवं कलाकार विष्णुभक्त फुयाँलको निधन भएको छ । जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा उनको निधन भएको हो । अभिनय गर्दागर्दै मर्ने चाहना छ भन्ने गरेका उनको नाचघरमा नाटक ‘महर्षि याज्ञबल्क्य’ मा अभिनयकै क्रममा निधन भएको हो । संस्कृतिविद् सत्यमोहन...
टेलीसिरियल खित्का डटकम शुरु गरे मेरी बास्सैका कलाकारहरुले
काठमाण्डौ – रोकिएको मेरी बास्सैका कलाकारहरुले नयाँ टेलीसिरियल खित्का डटकम सुरु गरेका छन् । सुरबिर पण्डित (दाह्री बा), पल्पसा डंगोल (चम्सुरी) लगायतका कलाकारहरुको सशक्त अभिनय रहेको खित्का डटकमको दोस्रो भागमा लागू औषधमा लाग्ने युवकका कारण परिवारले झेल्नुपरेको समस्यालाई मुख्य रुपमा उठाइएको छ । रामचन्द्र अधिकारी, शम्भु थापा, सुरेश थापा, अनिता...
बेनिशा हमालको “भाईरल गफ” के हो त ?
युएस खवर मिडिया ग्रुपद्धारा सञ्चालित युएस खवर अनलाईन टेलिभिजनले एउटा फरक कार्यक्रमको उत्पादन र प्रशारण आरम्भ गरेको छ । प्रदर्शनको संघारमा रहेको चलचित्र “किङ”कि नायिका बेनिशा हमालसंग यसै साता गरेको कुराकानिसंगै टेलिभिजनले कार्यक्रम “दि भाईरल गफ” को ओपनिङ गरेको हो । समाजका हरेक क्षेत्रका ताजा ताजा विषयलाई कार्यक्रममा समेटिने...
सुजनाले भेटिन् मित्र
केकेछडटकम-काठमाडौं-पौष ३, नेपालमा गित संगितको बजार दिन प्रति दिन खस्कीदै गईरहेको छ । नेपाली संगित बजार खस्कदै गए पनि नयाँ नयाँ प्रतिवान गायक , गायीकाको आगमन भने उत्साहजन रहेछ । पछिल्लो क्रममा हेटौडाकी गायीका सुजना लामा आफ्नो पहिलो गीत “तिमी आयौ” मार्फत बजारमा छाएकी छिन् । मित्र के.सी को...
जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्लाको गणेशमान ९ पोर्ताहमा पिता रामभगत यादव र माता लक्ष्मी देवीको गर्वबाट कान्छो सन्तानका रूपमा वि. सं. २०५० साल पुस महिनाको ११ गते जन्मिएर नेपाली तथा भोजपुरी फिल्म क्षेत्रमा २०६८ सालबाट लागिरहेका कलाकार हुन् नायक अभिनाश यादव। उनको बाल्यकाल सामान्य परिवारमा बितेको भए पनि सानैदेखि हिरो बन्ने...
मौलिक नेपाली डकुड्रामा “उल्टो जुत्ता ” रिलिज
उल्टो जुत्ता जसले कुसाईत जनाउछ भन्ने मान्यता जनमानसमा प्रचलित छ । के उल्टो जुत्ता आफैमा कुसाईत हो त ? यहिँ सबालको जबाफ खोज्ने प्रयास गर्दै रमाईलो प्रडक्सनले एक मौलिक डकुड्रामा निर्माण गरेको छ । चन्द्रमणी मुडभरी र बाबु राजा शाक्यको अभिनय रहेको उक्त डकुड्रामालाई सन्तोष लिम्बुले छायांकन गरेका हुन...
“हरपल” लिएर आए बाबा
केकेछ्डटकम-प्रकाश धिताल-काठमाडौं-मङ्सिर २१, पछील्लो समय गायनमा सफलता हासिल गरिरहेका गायक बाबा पाख्रिनको मन छुने गीत “हरपल” को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । बाबा पाख्रिन/क़ेसु को शब्द/संगीत मा तयार भएको गीतको भिडियोलाई रोहण नेपालीले निर्देशन गरएका हुन । फिचरिङ्मा देखिएका अभय र बिनिताको काम तारिफ योग्य छ । मिलन...
रङ्गक्षेत्रमा उदाउँदै अश्विनी
केकेछ डटकम -काठमांडौ – मङ्सिर हरेक मानिसको आ–आफ्नै सोच र योजना हुने गर्दछ । हामी सबैले साना बालबालिकालाई भेट्ने बित्तिकै नानी/बाबु पछी गएर के बन्ने भनेर सोध्ने गछौ । कसैले डाक्टर , पाईलट , ईन्जिनियर ,कलाकार , सेना या यस्तै कुनै लक्ष्य बोकेका हुन्छन् ।हुने विरुवाको चिल्लो पात भने...